Mike Tyson oo dib ugu soo noqonaya ciyaaraha feerka - Calanka.com
Mike Tyson oo dib ugu soo noqonaya ciyaaraha feerka
Feeryahankii mar ahaan jiray horyaalka miisaanka culus ee feerka dunida, Mike Tyson, ayaa dib ugu soo noqonaya tartarka feedhka oo waxa ay gorrodda is dari doonaan Roy Jones Jr oo afar goor isna hore u noqday horyaalka miisaanka culus ee feedhka dunida.
Tartankan ayaa la muddeeyey inuu ka dhaco magaalada Los Angeles 12 Sebtember ee soo socota.
Tyson oo haatan 54 jir ah ayaa markii ugu dambaysay ee uu tartan feedhka ah galaa waxay ahayd 2005 waagaas oo uu isaga ka adkaaday feedhyahanka reer Ireland ee Kevin McBride, waxaanay guul darradaasi ahayd tii lixaad ee uu la kulmo Tyson 58 tartan oo uu galay.
Ninkan uu la tartamayo oo Maraykan ah da’diisuna tahay 51 jir, ayaan qudhiisu tartamin tan iyo waagii uu ka guulaystay Scott Sigmon bishii Feeberweri 2018.
Xidhiidhka ciyaaraha Atleetikada ee gobolka California ayaa ogolaaday in tartankaasi dhaco, waxaanu noqon doonaa sideed wareeg oo toos Telefishannada lacagta lagu daawado looga sii dayn doono.
Tyson wuxuu ahaa qofkii ugu da’da yaraa ee ku guulaysta horyaalka miisaanka culus ee dunida, oo isaga oo 20 jir ah ayuu Trever Berbick 1986 ka guulaystay.
Waxa hadal haynta inuu ku soo noqonayo miidaanka feedhka sii buunbuuniyey muuqaal uu ku baahiyey baraha bulshada isaga oo tabobar ku jira.
Sannadkii 2006 ayaa Tyson wuxuu tartan afar wareeg ah la galay Corey Sanders. Waagaa wuxuu aad ugu baahnaa lacag maadaama oo uu sannadkii 2003 cadeedey inuu musallafay laakiin sidoo kale waxa uu ka hadlay in uu la soo dersay cudurka ku dhaca dhimirka waxaanu codsaday in la siiyo taakulo.
Dhawaan ayaa waxa soo baxay hadal hayn ah in Tyson la tartami doono ninkii hore loolanku uga dhexeeyey ee Evander Holyfield oo ciyaaraha ka fadhiistay 20014.
Holyfield oo haatan 57 jir ah ayaa laba goor oo hore oo ay iska horyimaadeen sagaashameeyadii ay guushu raacday waxaana ka mid ahaa 1997 oo Tyson dhibcaha lagaga qaaday qaniinyadii uu dhegta kaga dhejiyey ninkaa ay feedhtamayeen.
Jones Jr ayaa intii uu ciyaaraha ku soo jiray wuxuu isaguna hore ugu guulaystay horyaalka miisaanka dhexe ee dunida, miisaanka culus ee heerka dhexe iyo miisaanka culus.
Steve Bunce oo BBC-da uga faallooda ciyaaraha feedhka, ayaa erayadan ka yidhi tartankaa la filayo:
Dadku xiise gaara ayay u qabaan ciyaartan oo way sugayaan. Laba sano uun ka hor ayaa Roy Jones Jr ku guulaystay horyaalka dunida oo waxaad moodaa inuu is mahadiyey. Mike Tyson na waxa uu ku tartamyaa waayo aragnimo iyo xusuusta afar ama shantii sano ee u dambeeyey intii aanu ciyaaraha ka fadhiisan.
Dhacdadani waa ushii ceelka lagu dayeyey oo bal waxa la eegi doonaa in ay soo badhigaan ciyaar ay dadka agaasimaya tartankani ku sheegayaan “Tartanka Ruug-caddaaga”. Waxaana la sugayaa bal in ay arintani noqon doonto wax dadku la dhacaan iyo in kale.
Waan qirayaa in ay noqon doonto wax dadka madadaalisa, laakiin waa wax aan hore u dhicin.